BK Murli Today - Today Brahma Kumaris Murli: BK Murli 17 May 2016 Nepali
BK Murli 17 May 2016 Nepali
४ जेष्ठ २०७३ मंगलबार 17.05.2016 बापदादा मधुबन
“मीठे बच्चे– यस ड्रामामा विनाश हुनु निश्चित छ, तिमी विनाश भन्दा पहिले कर्मातीत बन्नुपर्छ।”
बाबाका कुन शब्दहरूको आकर्षण सम्मुखमा धेरै हुन्छ?
बाबा जब भन्नुहुन्छ– तिमी मेरा बच्चा हौ। यी शब्दहरूको आकर्षण सम्मुखमा धेरै हुन्छ। सम्मुख सुन्दा धेरै राम्रो लाग्छ। मधुबनले सबै बच्चाहरूलाई आकर्षित गर्छ किनकि यहाँ छ ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणहरूको संगठन छ। ब्राह्मणहरूले आपसमा ज्ञानको नै लेन-देन गर्छन्।
हमारे तीर्थ न्यारे हैं..........
तिमी बच्चाहरूले जान्दछौ– हामी अविनाशी यात्रा अथवा रुहानी यात्रामा गइरहेका छौं, जुन यात्राबाट हामी फर्केर मृत्यु लोकमा आउँदैनौं। मनुष्यहरूले त यो कुरा जान्दैनन् यस्तो पनि कुनै यात्रा हुन्छ! जहाँबाट फर्केर आउनु नै पर्दैन। तिमी भाग्यशाली आत्माहरूलाई अहिले यो कुरा थाहा भएको छ। यो पक्का याद गर्नु छ। हामी आत्माहरूले पार्ट खेल्छौं। त्यस नाटकमा यस्तो भनिदैन– म आत्माले यो वस्त्र लगाएर पार्ट खेलेँ, अब घर जान्छु। उनीहरूले त आफूलाई शरीर नै सम्झन्छन्। यहाँ तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान छ– हामी आत्मा हौं, यो शरीररुपी कपडा छोडेर फेरि गएर अर्को लिन्छौं। यो ८४ जन्मको पुरानो कपडा हो, यसलाई छोडेर नयाँ दुनियाँमा फेरि नयाँ कपडा लिन्छौं। यी लक्ष्मी-नारायणले नयाँ कपडा पहिरिएका छन् नि! तिम्रै राजधानीका हुन्। तिमीहरूले पनि गएर यस्ता नयाँ दैवी कपडा लगाउँछौ। यहाँ त भन्दछन्– म निर्गुणीमा कुनै गुण छैन। बाबाले नै फेरि यस्ता गुणवान बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मेरो नै पार्ट छ, आएर फेरि तिमीलाई निर्विकारी बनाउँछु। यहाँ यो हो जीवनबन्धधाम, रावणराज्य हो। यो तिम्रो बुद्धिमा छ, हामी पतितबाट पावन, फेरि पावनबाट पतित कसरी बन्छौं? तिमी बच्चाहरूले जान्दछौ– कलियुग छ अँध्यारो। रावणराज्यको अब अन्त्य छ, रामराज्यको पनि अब आदि हुनु छ। अहिले हो संगम। कल्पको संगमयुगमा बाबालाई नै आउनुपर्छ। दुनियाँले पनि बुझिरहेका छन्– अहिले विनाशको समय हो र स्थापनाको लागि भगवान कहीँ गुप्त भेषमा हुनुहुन्छ। अब गुप्त भेषमा त तिमी आत्माहरू पनि छौ। आत्मा अलग छ, शरीर अलग छ। यो मनुष्य चोला गुप्त भेष हो। बाबा पनि यसमा आउनुपर्छ। तिम्रो शरीरको नाम हुन्छ, उहाँको त शरीर छैन। तिमी पनि आत्मा हौ, उहाँ पनि आत्मा हुनुहुन्छ। आत्माको आत्माका साथ अहिले मोह भएको छ। गायन पनि छ– अरु संगत तोडेर, हजुरसँग जोड्नेछु। जसरी हजुर मोहजित हुनुहुन्छ, त्यस्तै हामी पनि बन्छौं। बाबा धेरै मोहजित हुनुहुन्छ। कति धेरै बच्चाहरू छन्, जो काम चितामा बसेर जलिसकेका छन्। परमपिता परमात्मा आउनु नै हुन्छ– पुरानो दुनियाँको विनाश गराउन, फेरि मोह कसरी हुन्छ? पतितहरूको जब विनाश हुन्छ, तब त शान्तिको राज्य हुन्छ। यस समयमा सुख त कसैलाई पनि छैन। सबै तमोप्रधान, दुःखी बनेका छन्। यो हो नै पतित दुनियाँ। शिवबाबाले नै आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ, जसको नाम शिवालय राखिएको छ। शिवबाबाले देवताहरूको राजधानी स्थापना गर्नुभयो। त्यो हो चैतन्य शिवालय। त्यो शिवालय जसमा शिवको चित्र छ, त्यो त जड भयो। अहिले तिमीले बुझिसकेका छौ– लक्ष्मी-नारायण अवश्य स्वर्गका मालिक थिए। पूज्य थिए, अब फेरि पूज्य बनिरहेका छन्। तिमीलाई अहिले ज्ञान छ। तिमी लक्ष्मी-नारायणको मन्दिरमा गएर उनलाई शिर निहुराउँदैनौ। तिमी त उनको राजधानीमा चैतन्यमा जान्छौ। जान्दछौ– हामी देवता थियौं, अहिले छैनौं। जो बितेर गएका छन् उनको चित्र बन्छ। लक्ष्मी-नारायणका मन्दिर सबैभन्दा धेरै बिडलाले बनाउँछन्। त्यसैले उनको पनि सेवा गर्नुपर्छ। तपाईंले यो जुन लक्ष्मी-नारायणको मन्दिर बनाउनुहुन्छ, हामी तपाईंलाई उहाँको ८४ जन्मको कहानी सुनाउँछौं। युक्तिले यो सौगात दिनुपर्छ। बाबाले सेवाको युक्ति त बताउनुहुन्छ। माताहरूले गएर भनून्– तपाईं उहाँको मन्दिर त बनाउनुहुन्छ तर उहाँको जीवन कहानीलाई जान्नुहुन्न। हामीले जान्दछौं र बताउन सक्छौं। सम्झाउने धेरै रसिलो हुनुपर्छ। बाबाले पनि बसेर सम्झाउनुहुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ– यदि छुट्टी मिल्दैन भने घरमा बसेर पनि याद गर। यो त जान्दछौ- हामी शिवबाबाका सन्तान हौं। मुरली त मिल्छ। यस्तो होइन, यहाँ आउनाले यादको यात्रा राम्रो हुन्छ, घरमा बस्दा यादको यात्रा कम हुन्छ। बादल आउँछ रिफ्रेस हुनको लागि। तिमी पनि आउँछौ रिफ्रेस हुन। बाबाको पासमा सम्मुख जाऔं। आत्मालाई ज्ञान छ, सम्मुख सुन्दा राम्रो लाग्छ। कुरा त त्यही हो, देख्दछौ– शिवबाबा, कसरी बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। “प्यारा बच्चाहरू, तिमी मेरा हौ”, तिमीले ८४ जन्मको पार्ट खेल्यौ। तिमी जन्म-मरणमा आउँछौ, म आउँदिनँ, मैले पुनर्जन्म लिन्नँ। अजन्मा पनि होइन। आउँछु तर वृद्ध तनमा प्रवेश गर्छु। तिमी आत्माहरू सानो बच्चाको शरीरमा प्रवेश गर्छौ, म परमधामबाट आउँछु, तल पार्ट खेल्न। म विकारीको गर्भमा आउँदिनँ। मलाई भन्छौ– त्वमेव माताश्च पिता..... मेरा कुनै पनि माता-पिता हुन सक्दैनन्। म केवल शरीरको आधार लिएर पार्ट खेल्छु। तिमीले मलाई बोलाउँछौ दुःख हरेर, सुख दिनको लागि। अहिले सम्मुखमा आएको छु, आत्माहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। यहाँ त सबै ब्राह्मण नै छौ। तिमी बाहिर जान्छौ भने हाँस र बकुल्ला हुन्छौ, यहाँ मधुवनमा तिम्रो संगत नै ब्राह्मणहरूको छ। आपसमा ज्ञानको नै लेन-देन गर्छौ। हामीले आफ्नो राजधानी स्थापना गरिरहेका छौं। बाबा आउनुभएको छ, बाबालाई याद गर्ने युक्ति बताउँदै गर। भोजन गर्दा पनि एक अर्कालाई इशारा दिँदै गर बाबालाई याद गर्नुहोस्। धेरै ठूलो संगठन छ नि। वहाँ त विकारी साथमा रहन्छन्, त्यसैले उनको आकर्षण हुन्छ। यहाँ त कसैको पनि आकर्षण हुँदैन। योद्धा, योद्धाको साथमा रहन्छन्। तिम्रो कुटुम्ब यो हो। बुद्धिमा यही रहन्छ, जो कोही मिल्यो भने उनलाई बाबाको परिचय देऊ, भन– भगवान्लाई याद गर्नुहोस्। दुई पिता छन् नि। लौकिक पिता भएर पनि भगवान्लाई याद गरिन्छ नि। उनी लौकिक पिता हुन्। लौकिक पितालाई परमपिता भनिदैन। उहाँ हुनुहुन्छ पारलौकिक बाबा। अवश्य परम पिताबाट वर्सा मिल्छ। यसप्रकार भूँ-भूँ गर्दै गर। तिमी ब्राह्मण हौ नि। संन्यासीले पनि भूँ-भूँ गरिरहन्छन् नि। यस दुनियाँको सुख काग-विष्टा समान छ, कति दुःख छ। उनीहरू त हुन् हठयोगी, निवृत्ति मार्गवाला। उनको धर्म नै बेग्लै छ। तिमीले जान्दछौ– सत्ययुगमा हामी कति सुखी पवित्र रहन्छौं। पहिले प्रवृत्ति मार्गको थियो, देवी-देवताको राज्य थियो। जो पवित्र थिए, उनै पतित बनेका छन्। पुकारिरहन्छन्– हे पतित-पावन आउनुहोस् र फेरि भन्छन् परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। हामी गएर ज्योतिमा समाहित हुन्छौं। पुनर्जन्मलाई पनि मान्दैनन्। अनेक मत छन् नि। दिन-प्रतिदिन वृद्धि भइरहन्छ। यो पनि बताउनु छ– संन्यासीहरूको वृद्धि कसरी हुन्छ? नागाहरूको पनि वृद्धि हुन्छ। जसको जुन धर्म छ, त्यसमा नै रहनाले फेरि अन्त मति सो गति हुन्छ, जसले जुन अभ्यास धेरै गर्छन्। जसरी कोही शास्त्र आदि पढ्छन् भने अन्त मति सो गति अर्थात् सानो उमेरमा नै शास्त्र कण्ठ हुन जान्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ– म फलानो हुँ, यो हुँ, यी सबै देह-अभिमानका कुरा छोडिदेऊ। आफूलाई अशरीरी आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर। यस शरीरलाई देखेर पनि नहेर। देह सहित देहका जो सम्बन्ध आदि छन्, सबैलाई छोड। आफूलाई आत्मा निश्चय गर, परमात्मालाई याद गर। यसमा समय धेरै लाग्छ। मायाले याद गर्न दिँदैन। नत्र वानप्रस्थीको लागि धेरै सहज छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ– अहिले तिमी साना-ठूला सबैको वानप्रस्थ अवस्था छ। एकातर्फ विनाश पनि भइरहन्छ, अर्को तर्फ जन्म पनि लिइरहन्छन्। पुनर्जन्म लिनु छ भने आउँछन्। बच्चाहरू पनि पैदा हुन्छन्। फेरि विनाश पनि हुन्छ। यो त तिमीहरूले जान्दछौ– कोही गर्भमा हुन्छन्, कोही कहाँ, सबै खतम हुन्छन्। सबैले आफ्नो हिसाब चुक्ता गरेर फर्केर जान्छन्। हिसाब-किताब रहेको छ भने राम्रोसँग सजाय खानु पर्नेछ। फेरि त्यो पनि कम हुन्छ। यस्तो होइन योगमा पनि बस, पाप पनि गर्दै गर। कति बच्चाहरू एकातर्फ चार्ट पनि लेखिरहन्छन्, फेरि भन्छन्– मायाले कालो मुख गरिदियो। मायाले हराइदियो भने कच्चा नै भनिन्छ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ– तिमीले यस्तो सम्झ हामी केही दिनको लागि यहाँ छौं फेरि गइहाल्छौं। यी सबैको विनाश भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। आफ्नो चार्ट हेर्दै गर– मैले कतिलाई बाटो बताइरहेको छु र पुरूषार्थ गराइरहेको छु? तन-मन-धनबाट रुहानी सेवामा मदतगार बन्नुपर्छ। भन्छन् मनलाई अमन गर्न सक्दैनौ। आत्मा त छ नै शान्त। हामी आत्मा आफ्नो परमधाममा गएर बस्छौं। कुनै पनि दुनियाँको संकल्प आउँदैन। यस्तो होइन आँखा बन्द गरेर अचेत हुनु छ। यस्तो धेरैले सिक्छन् पनि। १०-१५ दिन अचेत पनि हुन्छन्। यति समय पछि जाग्नेछु, यो अभ्यास गर्छन्। जसरी टाइम बम हुन्छ, त्यसको पनि टाइम हुन्छ, यो यति घण्टा पछि फुट्छ।
तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– हामीले योग लगाइरहेका छौं। जब तमोप्रधान, फोहर निस्किन्छ हामी सतोप्रधान बन्छौं तब यस शरीरलाई पनि छोड्छौं। हामी अहिले योगको यात्रामा छौं। समय मिलेको छ फेरि त यो शरीरलाई छोड्नु नै पर्छ फेरि त सबै खतम हुन्छ। समय निश्चित छ फेरि अन्त्यमा लामखुट्टे समान शरीर छोड्छन्। विनाश हुन्छ, तिमीले कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छौ फेरि विनाश शुरु हुन्छ। विनाशको धेरै ठूलो दृश्य छ। यो ड्रामामा निश्चित छ। तिमीले जान्दछौ– हाम्रो अवस्था एकरस रहन्छ। खुशीमा सधैं हर्षित रहन्छौं। यो दुनियाँ त खतम हुनु नै छ। जान्दछौ– कल्प-कल्प संगमयुग हुन्छ, फेरि विनाश हुन्छ। केवल बम मात्र होइन, प्राकृतिक प्रकोपले पनि मदत गर्छ। त्यसैले बच्चाहरूको यो बुद्धिमा रहनुपर्छ– अब हामी जानु छ। जति बाबालाई याद गर्छौ, त्यति विकर्म विनाश हुन्छ, उच्च पद पाउँछौ। च्यारिटी बेगिन्स एट होम। कोसिस गर्नुपर्छ। कन्या त्यो हो, जसले माइती घर र पराई घरको उद्धार गर्छ। तब त च्यारिटी बिगिन्स एट होम भयो नि। सेवामा लागिरहनुपर्छ भन, शिवबाबा भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर्यौ भने वर्सा मिल्छ। सीधा कुरा छ। म अल्फलाई याद गर्यौ भने स्वर्गको वर्सा तिम्रो हुन्छ। विश्वको मालिक तिमी बन्छौ। अब वर्सा पाउनु छ भने मलाई याद गर। बच्चाहरूको कर्तव्य हो– यो सन्देश दिनु। पहिले पनि दिएका थियौ। बताउनु छ– विनाश सामुन्नेमा खडा छ। कलियुग पछि सत्ययुग आउँछ। बाबाले नै आएर वर्सा दिनुहुन्छ। रावणले नर्कवासी बनाउँछ। बाबा आएर स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। कहानी यहीँको हो। सबैलाई ब्यूझाउनु छ। पहिला शिवको मन्दिरमा गएर सम्झाउनु छ। उहाँ बाबा नयाँ सृष्टि रच्नेवाला हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। उहाँ निराकार बाबा आउनुभएको छ। ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ। अब बाबा र वर्सालाई याद गर। ८४ जन्म पूरा भयो। अब हामी तपाईंलाई बताउँछौं। अब मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तपाईंको मर्जी। कुरा त धेरै राम्रो छ। बाबा नै दुःख-हर्ता सुख-कर्ता हुनुहुन्छ। थोरै सम्झायो अनि अघि बढ्यो। यो हो तिम्रो धन्दा। मेहनत त केही पनि छैन। केवल मुखबाट बोल्नुपर्छ– बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। देही-अभिमानी बन। शिवका पुजारीहरूको पासमा जाऊ अनि लक्ष्मी-नारायणका पुजारीका पासमा जाऊ। उनलाई उनको जीवन कहानी सुनाऊ। अच्छा!
१) तन, मन, धनबाट रुहानी सेवामा सहयोगी बन्नु छ। सबैलाई बाबाको परिचय दिएर वर्साको अधिकारी बनाउनुपर्छ। विनाश भन्दा पहिले कर्मातीत बन्नको लागि बाबाको यादमा रहनु छ।
२) बाबा समान मोहजित बन्नु छ। आत्माको आत्मासँग जुन मोह भएको छ, त्यसलाई निकालेर एक बाबामा लगन लगाउनु छ।
हर संकल्प बाबाको अगाडि अर्पण गरेर कमजोरीहरूलाई हटाउने सदा स्वतन्त्र भव:-
कमजोरीलाई हटाउने सहज साधन हो– जुन पनि कुनै संकल्प आउँछ, त्यसलाई बाबामा अर्पण गरिदेऊ। सबै जिम्मेवारी बाबालाई दियौ भने स्वयं स्वतन्त्र हुन्छौ। केवल एक दृढ संकल्प राख– म बाबाको र बाबा मेरो। जब यस अधिकारी स्वरुपमा स्थित हुन्छौ, अधीनता स्वतः समाप्त हुन्छ। हर सेकेण्ड यो चेक गर– म बाबा समान सर्व शक्तिहरूको अधिकारी मास्टर सर्व शक्तिमान हुँ!
श्रीमतको इशारा अनुसार सेकेण्डमा न्यारा र प्यारा बन्नु नै तपस्वी आत्माको निशानी हो।